‘Bangogombela kwesabo abanikazi besitolo sakwa Bargain’ – SANCO – eHowzit
‘Bangogombela kwesabo abanikazi besitolo sakwa Bargain’ – SANCO
INHLANGANO yabahlali iSANCO ibambisene nomphakathi ongaphansi kwamasipala waseZinqoleni ugcwale izitaladi zakuleyandawo nalapho kade ikhalaza ngesihluku abathi senziwa ngabesitolo esikhulu u Bargain Wholesalers sokungaqashi umphakathi wendawo.
Lenkampane enodeda ngendlale wesitolo kuthiwa ithutha izisebenzi ngamabhasi ziye kosebenza khona bese kuvaleka amathuba emisebenzi emphakathini ochazwe njengo ntulayo.
UmobhalawoMkhonto wesizwe Military Valerian Association (MKMVA) kwi Lower South Coast uMnu Sibunge Mazubane utshele intatheli ye eHowzit ukuthi isizathu esikhulu esenze ukuba kugcine sekubhukulwe esokuthi inkampani ephethe izitolo zakwa Boxer yafaka isicelo kumasipala kodwa abenkampane yakwa Bargain banqaba nathi lokho kungukucindezela umphakathi kanye nentuthuko.
“Thina salwela ukuba kukhululeke abantu baseNingizimu Africa, osekusiphatha kabi ukuthi kube khona abafuna ukuba ogombela kwesabo benjalo nje abaphonsi ngisho nokuncane nje emphakathini kunzima ngisho nokuxhasa umphakathi, wake wezwa kuthiwa kukhona uxhaso abalwenzili” kubeka uMazubane.
Amalunga omphakathi nawo abeyingxenye yemashi engukhukhulela ngoqo athe kufanele abaphathi balesi sitolo bavulele nabanye abaletha intuthuko emphakathini bangabi ngogombela kwesabo.
Imibiko iveze ukuthi umasipala waseZinqoleni uphansi phezulu ulwa loludaba ngabameli njengalokhu kuthiwa lensambatheka isithathe isikhathi eside iqhubeka futhi kungafinyelelwa esiphethweni.
Imizamo yokuthola abaphathi besitolo ayiphumelelanganjengalokhu izincingo zabo bezikhala zodwa zingabanjwa.